IPixel 3a kaGoogle kulula kakhulu ukuyilungisa ngokwe-iFixit | I-Androidsis
Kule veki iGoogle Pixel 3a yaziswa ngokusemthethweni, ifowuni enophawu yenza ukungena kwayo kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Ukwaziswa okungekho ngengozi kwinkampani. Kuba isizathu sokuba bathathe isigqibo sokumilisela uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha ngoku kungenxa yokuba isiphelo sabo esiphezulu banaso ukuthengisa okungalunganga kwimarike yamanye amazwe.
Njengoko kuhlala kunjalo xa kusungulwa ifowuni entsha kwintengiso, le Google Pixel 3a ihamba nge-iFixit. Iwebhusayithi eyaziwayo inoxanduva lokujonga ukuba ngaba ifowuni kulula ukuyilungisa okanye hayi. Kwimeko yoluhlu oluphakathi, kukho iindaba ezimnandi, kuba kulula ukuzilungisa.
Kule meko, eKuyenzeka ukuba ubone ukuba ukuvula ifowuni akuyona into enzima. Ngokungafaniyo nezinye iimodeli ezisandula ukwenziwa, ukulungiswa kwale Pixel 3a akunzima konke konke. Kuba akukho mfuneko yokuba nezixhobo eziphambili kakhulu ukuze ukwazi ukuvula isixhobo.
Le yinto ikwabalulekile kwiscreen sakho, ekulula ukufikelela kuyo, njengoko kubonisiwe enkosi kolu hlalutyo lwe-iFixit. Kwakhona, le yimodeli yokufumana amanqaku aphezulu kuGoogle ukuza kuthi ga ngoku. Kule meko, inamanqaku esi-6 kwali-10 ngokwemiqathango lula ukulungiswa.
Ngale ndlela, le Pixel 3a iyazigqwesa ezinye iimodeli zohlobo. Iifowuni zangaphambili ezinje ngePixel 3 kunye ne-3 XL zishiywe ngamanqaku nje ama-3 kwali-10. Into ekufuneka izuze indleko yokulungisa nayo.
IPixel 3a entsha zingathengwa ngoku ngokusemthethweni kwivenkile kaGoogle. Eyona nto inokwenzeka, kwezi veki ziya kuphehlelelwa nakwezinye iivenkile ezikwi-Intanethi nakwizinto ezibonakalayo. Ke kuyakufuneka sibone ukuba intengiso yabo isebenza njani. UGoogle ucacile ukuba baya kuqhubeka nokwazisa Iifowuni eziphakathi kwinqanaba lokuthengisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukulungiswa kweGoogle Pixel 3a kulula kakhulu
Ezona zicelo zibalaseleyo ze-Android zokuthumela imali kwamanye amazwe